यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दह्रो (कडा) हुँदैन, लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ होला ? -
October 9, 2019 October 9, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दह्रो (कडा) हुँदैन, लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ होला ?
जिज्ञाषा: यौनसम्पर्क गर्दा मेरो लिंग दह्रो (कडा) हुँदैन, के गर्ने होला ? किन उत्तेजित नभएको होला, लिंग कसरी उत्तेजित हुन्छ ?
तपाइको लिंग दर्‍हो नहुने कुराबाहेक अन्य केही जानकारी दिनुभएको छैन । न उमेरका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, न तपाईंले यौनसम्पर्क राख्दै आएकी महिलासँग तपाईंको सम्बन्ध के हो उल्लेख गर्नुभएको छ । पहिलेदेखि नै यस्तो थियो र सधंै नै यस्तो हुन्छ कि रु यदि यी जानकारी दिनुभएको भए तपार्इंको विशिष्ट परिस्थितिअनुसार जवाफ दिन सकिन्थ्यो, तर जे भए पनि तपाईंको जस्तै समस्यालाई केन्द्रित गरी केही चर्चा गरौं ।
हामीले इन्द्रियहरूबाट सन्देश ग्रहण गर्छौं । त्यो मस्तिष्कसम्म पुग्छ र चेतन रूपमा हामीले उक्त कुरा थाहा पाउँछौं । यौनसम्बन्धी कुरा पनि यसैगरी हाम्रो मस्तिष्कसम्म विभिन्न तरिकाले पुग्छ । विभिन्न अंग ९स्रोत० बाट, सन्देशहरू स्नायुप्रणालीका नसाबाट, विद्युतीय तरङ्ग वा रसायनहरूको माध्यमबाट मस्तिष्कसम्म पुग्छन् र त्यसलाई मस्तिष्कले अर्थ लगाएपछि हामीले थाहा पाउँछौं । यौन उत्तेजना हुने किसिमका सन्देश प्राप्त भए व्यक्तिमा यौन उत्तेजना बढ्छ ।
लिंग किन उत्तेजित नभएको होला रु
चाहिएको बेला चाहेजस्तो गरेर लिंग उत्तेजित नभै यौनसम्पर्क राम्रोसँग राख्न नसकेको अनुभव धेरैजसो पुरुषले जीवनको कुनै न कुनै समयमा गरेकै हुन्छन् । लिंग उत्तेजित नहुनु वा उत्तेजित अवस्थामा आइसकेको लिंगलाई त्यही स्थितिमा कायम राख्न नसकिने समस्यालाई ष्mउयतभलअभ वा भचभअतष्भि मथकागलअतष्यल भनिन्छ ।
राम्रोसँग लिंग उत्तेजित नहुने कारण शारीरीक तथा मानसिक दुवै हुन सक्छन् । लिंगको उत्थित हुन सक्ने तन्तुमा रक्तप्रवाहलाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पर्ने कुनै पनि स्थिति लिंग उत्तेजना नहुने सम्भावित कारण बन्न सक्छ । मधुमेह, मृगौलाको खराबी वा कलेजोको खराबी, प्रजनन अंग वा त्यसको स्नायु प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने गरी भएको चोटपटक वा रोग, रक्तनसा वा रक्त प्रणालीमा भएको खराबीले लिंग उत्तेजित नहुने समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । एलर्जी, रक्तचाप तथा मानसिक रोगको उपचारका क्रममा खाइने कतिपय औषधी पनि यसका कारण हुन सक्छन् । पार्किन्सन्स रोग वा क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने औषधीहरूले पनि यस्तो गराउन सक्छ । सार्‍है थकाइ लागेका बेला होस् वा अधिक मादक पदार्थ सेवन गरेकाले होस्, लिंग उत्तेजनामा नकारात्मक असर पारेको हुन सक्छ । यस्तो कुनै प्रसङ्ग उल्लेख नगर्नु भएकाले तपाईंको सन्दर्भमा यस्तो केही भएजस्तो लाग्दैन, तर तपाईं नै यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ, विचार गर्नुहोला कतै यीमध्ये केही भएको त छैन रु
यो पक्कै हो कि यसरी अनपेक्षित रूपमा लिंगको उत्तेजना नहुँदा त्यसका बारेमा निकै चासो तथा चिन्ता हुन्छ । तपाईंले आफूलाई वा श्रीमतीलाई रोग लागेको होला भन्ने जिज्ञासा राख्नुभएको छ । कतिपय पुरुषमाथि आफ्नो यौन क्षमता प्रदशित गर्नुपर्ने दबाब हुन सक्छ । त्यस्तो भए तपाईंको समस्या अझ चर्को हुनसक्छ । यस्तो स्थितिलाई उभायचmबलअभ बलहष्भतथ भनिन्छ । यहाँ आफ्नो तनाव, चिन्ता वा भय कम गर्न सक्नुपर्छ ।
समाधान के होला रु
एभायचmबलअभ बलहष्भतथ अर्थात् कार्य सम्पादनको चिन्ताले धेरै कुरा बिगार्न सक्छ । जब कुनै कार्य ठीक तरिकाले हुँदैन कि भनेर चिन्ता गर्न थालिन्छ, बिस्तारै यो चिन्ता बढ्न थालेपछि कार्य सम्पादन क्षमता मै र्‍हास आउन थाल्छ । कति जनाले त यौन क्रियाकलापवाट परहेज गर्छन् अनि आत्मसम्मान घट्न थाल्छ, सम्बन्धमा समस्या सिर्जना हुन थाल्छ । यस विषयमा सधैं चिन्ता गरिरहँदा वा चिन्ता गर्दिन भनेर ९कतै आज गर्दा पनि उत्तेजित हुँदैन कि भनेर० त्यसकै बारेमा जहिले पनि सोचिरहँदा यौनकार्य सम्पादनमा सुधार आउँदैन । मनको भय वा चिन्ता हटाउनु आवश्यक हुन्छ । आत्मविश्वास बढाउनुपर्छ । तनाव र चिन्ता कम गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ । कहिलेकाहीं औषधी समेत सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपयले यस्तो स्थितिमा हिप्नोसिसले मद्दत गर्ने कुरा गरेका छन् ।
महत्त्वपूर्ण कुरा के भने दृढ अठोट तथा धैर्यता यसका लागि अति नै आवश्यक हुन्छ । भावनात्मक तथा प्रेमपूर्ण सम्बन्धका लागि समर्पित भएर प्रयास गर्नुपर्छ । सम्बन्धलाई नै रमाइलो राख्न के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्नी श्रीमती वा यौनसाथीको सहयोग तथा समझदारी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रीमती वा यौनसाथीको समझदारीपूर्ण सहयोगले मनमा भएको चिन्ता हटाउन अनि आत्मविश्वास जगाउन मद्दत मिल्छ । साप्ताहिकबाट ।
२२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १०स्०३ मा प्रकाशित
चिनियाँ राष्ट्रपतिको स्वागतका लागि बनाइएका ब्यानर च्यातिए, एक जना पक्राउ
May 27, 2020 May 27, 2020 अखवार अनलाइन
लकडाउनको बेला यौन सम्पर्कमा संयमित जरुरी, यस्तो छ कारण
April 11, 2020 April 11, 2020 अखवार अनलाइन
किन खोज्छन बिबाहित महिलाले केटा साथी, आफू त आन्टीको सेवक न परियो
श्रीमान विदेशमा श्रीमतीसंग वडाअध्यक्षको रोमान्स, को हुन यी वडाअध्यक्ष ?